Ceni: “Hisokatra ny 1 desambra ny lisi-pifidianana, saingy… “ | NewsMada
Ceni: “Hisokatra ny 1 desambra ny lisi-pifidianana, saingy… “
“Hisokatra ny lisi-pifidianana manomboka ny 1 desambra ho avy izao, fa hotanterahina ny fanavaozana izany isan-taona”, hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia, omaly.
Hatao ao anatin’nyfanavaozana ny fametrahana kahie roa eny anivon’ny fokontany. Eo ny fandraisana anarana ny feno taona ka tokony hisoratra ao anatin’ny lisitra. Hatao koa ny fisoratana anarana, tany amin’ny toeran-kafa na nifindra monina ka tonga mponina vaovao eo amin’ny fokontany.
Misy koa ny kahie iray hampidirana ireo mpifidy fanampiny. Misy ny fanesorana ireo maty sy ny nifindra monina, tsy eo amin’ny fokontany intsony ary ireo very zo tsy mahazo mifidy noho ny raharaham-pitsarana.
Halefan’ny sefo fokontany any amin’ny Ceni ireo kahie ireo, hampidirina ao anatin’ny lisi-pifidianana, araka ny fanazavany. Hofaranana vonjimaika ny 15 feboary izany, ary hofaranana tanteraka ny 15 mey 2019.
Aorian’ny famaranana tanteraka ny lisi-pifidianana vao azo ampiasaina io lisitra nohavaozina io. Tsy azo ampiasaina izany io nohavaozina io, raha tsy amin’ny fifidianana, hatao manomboka ny 16 mey 2019.
Tsy misy na inona na inona azo atao aloha ny amin’ny lisitry ny mpifidy amin’izao fotoana izao, hiatrehana ny fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa.